Wednesday February 20, 2019 - 22:47:32 in Wararka by Mogadishu Times
Abwaan Cawaale Ismaaciil Saleebaan oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa gabay ku cabbiray sheeko jacayl oo nooceeda oo kale ay ku yartahay bulshada Soomaalida. Gabaygan oo uu ugu magac daray "naf jacayl maloo huray" ayuu abwaanku kaga warr
Abwaan Cawaale Ismaaciil Saleebaan oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa gabay ku cabbiray sheeko jacayl oo nooceeda oo kale ay ku yartahay bulshada Soomaalida. Gabaygan oo uu ugu magac daray "naf jacayl maloo huray" ayuu abwaanku kaga warramayaa sida ay u soo jiidatay sheekada gabadh ina adeerkeed ugu deeqday killideeda, kaddibna taas ay sababtay inay is jeclaadaan ayna is guursadaan. Wiilka iyo gabadha ayaa waxay ahayeen ilma adeer, mana jirin xirriir horay uga dhaxeeyey ama damac guur oo ka horreeyey ka hor inta aan dhakhtarka loo qaadin wiilka.
Lahaanshaha sawirkaCAWAALE ISMAACIILImage captionAbwaan Cawaale Ismaaciil